Mashiinka Buuxinta, Cubitainer, Weelka Biyaha Kufri kara - Kaiguan
Soo qaado shaybaarro bilaash ah iyo buugaag sawir lehTag
Changzhou Kaiguan Baako & Technology Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa magaalada Changzhou, gobolka Jiangsu, Shiinaha. Waxay ku taal bartamaha Shiinaha dhaqaale ahaan horumaray Yangtze wabiga Delta leh gaadiid ku habboon iyo jawi saad sare. Waxaan nahay shirkad tiknoolajiyad gaar loo leeyahay oo khibrad u leh naqshadeynta, horumarinta, soo saarista alaabada baakadaha dabacsan.
Fiidiyowga tijaabada cadaadiska
SII FAHAN WAYN ALAABADA
Is rogrogmi kara oo jilicsan, Iskudhufmi kara oo fudud, Kharash dhimista
bacda sheer sanduuqa
Jerry-Collapsible Jerry wuu awoodaa
waxaan kugula talineynaa inaan dooranno
Aqoon isweydaarsigeenu wuxuu ku qalabeysan yahay 4 nooc mashiinada wax lagu duubo (Model 25A); 2 wuxuu dhigaa mashiinada wax taaj oo kale oo duritaanka ah oo gaaraya 120g, 4 wuxuu dhigaa mashiinada wax lagu duro ee toosan oo ah 125g, 2 wuxuu dhigaa mashiinada wax lagu duro ee tooska ah ee 80g, 2 wuxuu dhigaa mashiinada bac sameynta.
Waxaan ku bixin karnaa 1 litir ilaa 50 litir bacda shaandhada ku jirta sanduuqa; Oo waxaan ku siin karnaa cubitainers ka volum 1 litir ilaa 25 litir.
Waxaan leenahay keyd dhammaan boorsooyinka cabbirka caadiga ah. Khadadka wax soosaarkayagu waxay shaqeynayaan 24 saacadood.
Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag 8000㎡ ah
Waxay leedahay 60 shaqaale
12 sano oo khibrad wax soo saar ah
SHAQO LACAG LA'AAN AH
4000㎡ qol nadiif ah
Suuqyada iyo Codsiga
Gamco nadiifiye . Dareeraha jeermiska dilaa
Jel Medical Medical
Xilliga dhirta (Sake, Suugo soy, khal)
waa maxay Macaamiisheena ma dhahaan?
Qubrus lau Hong kong SAR
Tayo aad u wanaagsan. Wax walba waxay u shaqeeyeen sidii lagu sharraxay.Bagaalka taagan wuxuu runti gacan ka gaystay yareynta qiimaha saadka halka ay adagtahay oo adagtahay sida lasoo bandhigay
Yooxanaa runtii wuu na caawiyay oo wuxuu noogu adeegay si xirfad leh isgaarsiinta aan cilladda lahayn.Waxaan hubaal ka iibsan doonnaa markale.Waad ku mahadsan tahay taageeradaada!
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soosaaraysay alaab heer caalami ah oo heer caalami ah iyadoo u hogaansanaysa mabda'a tayada marka hore Alaabtayadu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan oo ku saabsan warshadaha iyo kalsooni aad u qiimo badan oo ka dhexjirta macaamiisha cusub iyo kuwii hore ..
Bacaha loogu talagalay hypochlo ...
Waxaa saameeyay COVID-19, waxaa sii kordhaya baahida loo qabo alaabada bakteeriyada disha sida jeermiska iyo aalkolada. Laga bilaabo bilowga sanadka 2020, mashiinadeena waxay shaqeynayaan 24 saacadood maalin kasta suuq loogu talagalay sunta disha aalkolada iyo khamriga. Waxaan diraynaa in kabadan 100000 kumbiyuutarro b ...
Maxay tahay sababta raashin?
Kani waa badeecadeena cusub ee qaabeynta cusub. Boorsada ayaa laga sameeyay caag balaastik ah. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) ...
Marba marka ka dambaysa macaamiisheennu waxay bilaabayaan inay adeegsadaan sheer si ay u buuxiyaan alaabada dareeraha ah. Kadib, waa maxay farxad? Kani waa weel baakad cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda Sanduuqa iyo faa iidooyinka soo kordhay ee agabyada baakadaha adag ama kuwa adag, taas oo ka dhigaysa jeegga p ...